सोमबार, आषाढ २२, २०७७
Mon, Jul 6, 2020 at 5:47am
विदेशमा अलपत्र ६ यस नेपाली स्वदेश फर्किए #आहा खबर# नेविसंघको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन माग #आहा खबर# ढलबाट कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फेला परेको प्रमाण छैनः स्वास्थ्य मन्त्रालय #आहा खबर# पार्टी विभाजन रोक्न माग #आहा खबर# सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुको विकल्प छैनः रायमाझी #आहा खबर# निर्णायक भनिएको बालुवाटार वार्ता विनानिष्कर्ष सकियो #आहा खबर# 'छिटो पूरा हुने आयोजनाहरुमा मेलम्चीको नाम पनि दर्ज हुने देखियो' #आहा खबर# नेपालमा थपिए २९३ जना कोरोना सङ्क्रमित, १३२ डिस्चार्ज #आहा खबर# बालुवाटारमा ओली-प्रचण्ड वार्ता सुरू,दुबै पक्षबाट तीन-तीन नेता सहभागी #आहा खबर# साउदी अरेबियाबाट उडे २७ सय अलपत्र नेपाली #आहा खबर# सुदूरपश्चिममा पुगे ३ हजार ४ सय ६९ काेराेना संक्रमित, कैलालीमा मात्रै ९ सय १६ जना #आहा खबर# कांग्रेसले बनायो काेराेना अनुगमन समिति #आहा खबर# नेकपा विवाद: प्रचण्ड, खनाल र नेपाल पुगे राष्ट्रपति निवास #आहा खबर# तेल बोक्ने ट्यांकरमा १२८ केजी लागूऔषध, चालकसहित २ जना पक्राउ #आहा खबर# बाँदर धपाउन किसानलाई निःशुल्क बन्दुक वितरण #आहा खबर#
चन्द्रमामा पनि ‘फोर जी’ ! अब रोबोटले चन्द्रमाबाट प्रत्यक्ष तस्वीरहरू पठाउने
सोमबार, फागुन २१, २०७४ साल
फागुन २१ , एजेन्सी । नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु माझ "फोर जी" ल्याईएको धेरै भएको छैन । नेपालका धेरै मोबाइल प्रयोगकर्ताले तीव्र गतिको फोर जी नेटवर्कको प्रयोग गर्न नपाइरहेका बेला चन्द्रमामा भने त्यसको शुरूवात हुने भएको छ । भोडाफोन जर्मनी र नोकिया कम्पनी मिलेर चन्द्रमामा फोर जी सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएका हुन् । फोर जीको प्रयोग गरेर त्यहाँ पठाइएको रोबोटले चन्द्रमाबाट प्रत्यक्ष..
अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना
आईतवार, फागुन २०, २०७४ साल
अछाम, २० फागुन । अछामको साफेबगर नगरपालिकाले नगर डाटा प्रोटल तथा सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरेको छ । नगरपालिकाले शनिबार सूचना प्रविधि केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नेमा देशभरमै पहिलो स्थानीय तह बनेको बताएको छ । स्थानीय जनतालाई सुसूचित पार्ने र नगरका हरेक गतिविधिलाई सूचना प्रविधिसँग अपडेट गराउने उद्देश्यले सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मालिका विकास संघ..
उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतले ल्यायो यू ट्युब च्यानल सञ्चालनमा
आईतवार, फागुन १३, २०७४ साल
सुर्खेत, १३ फागुन । उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतले आफ्ना हरेक गतिविधिलाई डिजिटल बनाउनका लागि यू ट्युब च्यानलको शुभारम्भ गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतको ३४औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज यू ट्युब च्यानलको शुभारम्भ गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न यहाँका उद्योगी–व्यापारीले लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्न जरुरी रहेको बताए । यहाँका उत्पादनलाई..
केएल टावरमा मोबाइल किन्दा सलमानको कार्यक्रमको टिकट निशुल्क पाइने
शुक्रबार, फागुन ११, २०७४ साल
फागुन १०, २०७४ काठमाडौं: मोबाइल किन्ने आफ्ना ग्राहकलाई निशुल्क टिकट उपलब्ध गराउने योजना केएल टावरले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । 'केएल मोबाइल हव' बाट फोन किन्दा १० मार्चदेखि काठमाडौंमा हुने बलिउड स्टारहरूको कार्यक्रमको पास निशुल्क पाइने भएको छ। मोबाइल हव परिसरमा हात खाली नजाने उपहार योजनामा मोबाइल किन्नेको भीडलाई लक्षित गर्दै यस्तो योजना सुरु गरिएको हो । मोबाइल मेला २८ फेब्रुअरीसम्म..
इन्स्टाग्राममा आफ्नो फोटोको कसैले स्क्रिनसट लिएको थाहा पाउन सकिने, नयाँ फिचर ल्याउंदै
बिहिवार, फागुन १०, २०७४ साल
काठमाडौँ , १० फागुन । सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम अहिले नेपाली युवा पुस्ताको लागि रोजाईको संजाल बनेको छ। इन्स्टाग्राममा आफूले खान थालेको खानेकुरादेखि घुम्न गएका फोटोसम्म शेयर गर्ने गरिन्छ। इन्स्टाग्रामको खास कुरा के छ भने यस्मा राखिएको तस्बिरहरु डाउनलोड गर्न मिल्दैन । तीनै फोटोहरुलाई स्क्रिनसट गरेर विभिन्न समाचार बनाउने तथा दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि बढ्दो मात्रामा छ । इन्स्टाग्राम अहिले ती कुरालाई मध्यनजर गर्दै..
ई-टिकेटिङ शुरु गर्दै साझा यातायात, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्य
ललितपुर, १० फागुन : साझा यातायातले ‘इटिकेटिङ’ शुरु गर्न तयारी थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा इटिकेटिङ लागू गर्न लागिएको साझा यातायातका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले जानकारी दिए । इटिकेटिङ शुरु भएपछि यात्रुले भाडामा पैसाको साटो कार्डको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । साझाका सबै बसमा उक्त नियम लागू हुने उनले बताए । नियमित रुपमा यात्रा गर्ने यात्रु यो सेवाबाट..
नुवाकोटमा मुख्य बजारक्षेत्रको सिसीटिभी क्यामरा प्रयोगविहीन
नुवाकोट, १० फागुन । यहाँको मुख्य बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका सिसीटिभी (क्लोजसर्किट टेलिभिजन) क्यामरा प्रयोगविहीन भएका छन् । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रमा जडान भएर प्रहरी कार्यालयमार्फत निगरानी गरिँदै आएको २५ थान क्यामरा सबै प्रयोगविहीन भएको हो । संघको पहलमा रु ३५ लाखमा जडान गरिएका क्यामरा मर्मतका लागि रकम उपलब्ध नगराउँदा बिग्रिएको सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरेपछि एक महिनादेखि थन्किएका छन्..
आगामी दुई वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय : नयाँ सरकार
शुक्रबार, फागुन ४, २०७४ साल
काठमाडौँ, ४ फागुन : सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी)ले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार साँझ पदबहाली गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई प्राविधिक रुपमा दक्ष बनाउन र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हुन्..
भारतले गुगललाइ लगायो २ अर्ब जरिवाना
सोमबार, माघ २९, २०७४ साल
एजेन्सी, २९ माघ । २५ माघ २०७४ कम्पिटिसन कमिसन अफ इण्डियाले गुगलमाथि २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवाना गरेको छ । अनलाइन सर्च तथा विज्ञापन बजारमा आफ्नो मजबुत स्थितिको दुरुपयोगका विषयमा दोषी ठहर गर्दै भारतको कम्पिटिसन कमिसन अफ इण्डियाले गुगलमाथि १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख भारु जरिवाना गरेको हो । Matrimony.com र कन्जुमर युनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसाइटीले सन् २०१२ सीसीआईमा गुगल विरुद्ध..
सोसल साइटमा ‘डाउनभोट फिचर’ ल्याउने फेसबुकको तयारी,फिचरको अमेरिकामा परीक्षण
आईतवार, माघ २८, २०७४ साल
काठमाडौं, माघ २८ । फेसबुकले सोसल साइटमा कहिल्यैपनि डिसलाइक बटन नल्याउने तयारी गरेको छ । डिसलाइक बटनका कारण अनलाइन दादागिरीलाई बढावा मिल्न सक्ने फेसबुकको ठम्याई छ । तर डिसलाइक बटनको आवश्यकता प्रयोगकर्ताहरुले गर्दै आएका छन् । अनि त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै फेसबुकले यो सँग मिल्दोजुल्दो फिचर फेसबुकमा ल्याउँदैछ । समाचार अनुसार फेसबुकले अहिले एक नयाँ बटनको टेस्ट गरिरहेको छ जसको नाम हो Downvote..
नेपालमा दैनिक १४ हजार मोबाइल सेट भित्रिने
शुक्रबार, माघ २६, २०७४ साल
काठमाडौँ, माघ २६ । मुलुकमा मोबाइल सेटको व्यवसाय बढ्दै जाँदा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा दैनिक १४ हजार मोबाइल सेट भित्रिरहेका छन् । पछिल्लो २१ महिनामा झन्डै ८८ लाख ५९ हजार मोबाइल सेट आयात भएका छन् । उक्त तथ्यांकलाई प्रतिदिन हिसाब गर्दा दैनिक १४ हजार मोबाइल सेट भित्रिरहेको देखिन्छ । २०७३ बैशाख १ मा मोबाइलको आइएमआई..
रुकुमका २१ वर्षीय युवाले आविष्कार गरे घरमा चोर पसेको सूचना दिने यन्त्र
बिहिवार, माघ २५, २०७४ साल
रुकुम, २५ माघ । सामान्य गाउँको परिवारमा जन्मेका रुकुम पश्चिमका एक विद्यार्थीले घरमा चोर पसेको सूचना दिने यन्त्र आविष्कार गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिका–११ भलाक्चाका २१ वर्षीय वसन्त ओलीले कोठामा कोही प्रवेश ग¥यो भने थाहा पाउने सेक्युरिटी सिस्टम नामको यन्त्र आविष्कार गरेका हुन् । हाल दाङको पद्मोदय नमूना माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत ओलीले यस्तो यन्त्र आविष्कार गरेपछि जिल्लामा..
एनसेलले ल्यायो ‘प्रेम दिवस’ लक्षित विशेष अफर
काठमाडौं, माघ २४ । एनसेलले भ्यालेन्टाइनलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्याक ल्याएको छ । आउँदै गरेको भ्यालेन्टाइनका लागि एनसेलले असिमित भ्वाइस प्याक र डेटा प्याकसहितको अफर ल्याएको एनसेलले जनाएको छ । असिमित भ्वाइस तथा डेटा प्याकको अफर बिहीबार देखि १५ दिनको लागि लागु हुने जनाएको छ । अफर अन्तर्गत, एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले १५ रुपैयाँमा असिमित भ्वाइस प्याक लिई विहान ५..
पाल्पामा हात देखाउँदा पानी आउने 'सेन्सर धारा'मा आकर्षण बढ्दो
मंगलवार, माघ २३, २०७४ साल
पाल्पा, २३ माघ । पानीको बचतका लागि धारामा हात देखाउँदा मात्र पानी झर्ने सेन्सर धाराको जडानप्रति पाल्पाका होटल व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन् । पहाडी जिल्ला पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा खानेपानीको बचतका लागि होटलमा सेन्सर धाराको प्रयोग गरी अनावश्यक पानीको खर्च रोक्नका लागि यसको प्रयोग बढेको हो । होटलमा पानी प्रशस्त नहुनु र त्यसमा पनि हात मुख तथा दाँत माझ्दा धारा खोलेर पानी अनावश्यक..
फोनमा कुरा गर्दा गर्दै पैसा सकिए पनि प्रिपेड ग्राहकको फोन नकाटिने
सोमबार, माघ २२, २०७४ साल
काठमाडौं, माघ २२ । नेपाल टेलिकमले यो आर्थिक बर्षमा १५ अर्व ३७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । नेपाल टेलिकमको १४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले पोहोरको तुलनामा यो बर्ष खुद नाफा १३ दशमलव ४२ अंकले बढेर १५ अर्व ३७ करोड नाफा कमाउन सफल भएको जानकारी दिएकी हुन् । यस्तै ग्राहक संख्या पनि पोहोरभन्दा १७ दशमलव २३ प्रतिशतले बढेर..
अब मानिस र जनावरको जस्तै बोटबिरुवाको पनि डिएनए परीक्षण
आईतवार, माघ २१, २०७४ साल
ललितपुर, २१ माघ : मानिस र जनावरको जस्तै बोटबिरुवाको पनि डिएनए परीक्षण शुरु भएको छ । खुमलटारस्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(नास्ट) ले बोटबिरुवाको फूल, पात बोक्रालगायत भागबाट डिएनए परीक्षण थालेको हो । वनस्पतिमा रहेको आशिंक गुणका आधारमा परीक्षण गर्न थालिएको नाष्टमा कार्यरत वैज्ञानिक डा रामचन्द्र पौडेलले बताए । “लोपन्मुख जातीको बोटबिरुवालाई भविष्यसम्म सुरक्षित गर्नका लागि यसले सहयोग गर्छ,” उनि भन्छन्, “अव्यवस्थित..
चौधरी ग्रुपद्वारा मेजूका तीन स्मार्टफोन सार्वजनिक
बिहिवार, माघ १८, २०७४ साल
काठमाडौं, माघ १८ । चौधरी ग्रुपले मेजूका तीन स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । ग्रुपले मेजू प्रोसँगै एम सिक्स तथा एम फाइभ एस फोन सार्वजनिक गरेको छ । चौधरी ग्रुपका मोबाइल डिभिजन बिजनेस यूनिट हेड रमेश श्रेष्ठले आकर्षक डिजाइन र उच्च क्षमता वान हार्डवेयरका साथमा निर्माण भएका फोनले ग्राहकको मन जित्ने बताए। ड्यूल स्कृन र ड्यूल क्यामरा रहेको प्रो सेभेन यसअघिका मोडेलहरुभन्दा भिन्न..
नेपालमै पहिलो पटक नवलपरासीमा सूचना प्रविधिमार्फत वन व्यवस्थापन
बुधबार, माघ १७, २०७४ साल
नवलपरासी, १७ माघ। नेपालमै पहिलो पटक नवलपरासीमा सूचना प्रविधिमार्फत वन व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिमार्फत जिल्लामा वन व्यस्थापनको कामअघि बढाइएको वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले जानकारी दिए । डाटा म्यानेजमेन्ट - ट्रयाकिङ नामाकरण गरिएको सो प्रविधिमार्फत जिल्लामा वन व्यवस्थापनको काम शुरु गरिएको र यसका लागि कार्यालयले अनलाइन मोबाइल एप्स तयार गरेर २४ वटा मोबाइल सेटमा सो प्रविधि डाउनलोड गरी दिनभर..
कन्चनपुरमा क्षयरोग पत्ता लगाउने अत्याधुनिक यन्त्रको प्रयोग गरिंदै
आईतवार, माघ १४, २०७४ साल
कञ्चनपुर, १४ माघ । राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रले सदरमुकाम भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पताललाई क्षयरोग पत्ता लगाउन अत्याधुनिक जिन एक्सपोर्ट मेशिन शनिबार उपलब्ध गराएको छ । अत्याधुनिक यन्त्र नहुँदा अस्पतालले क्याट एक र क्याट दुई प्रविधिबाट बिरामीको खकार जाँच गरी उपचार गर्दै आएको थियो । “पुरानो प्रविधिबाट क्षयारोग पत्ता लाग्न बढी समय लाग्ने गरेको थियो”, अस्पालका ल्याब टेक्निसियन हर्कबहादुर कुँवरले भने , “मेशिन आएपछि..
चितवनमा बाघ गणनामा प्रयोगभएका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ६७ क्यामेरा हराए
बिहिवार, माघ ११, २०७४ साल
रत्ननगर, चितवन, ११ माघ : चितवन र पर्सा कम्प्लेक्समा बाघ गणनाका लागि राखिएका ६७ वटा अत्याधुनिक प्रविधिको क्यामेरा हराएका छन् । बाघ आवतजावत गर्दा फोटो खिच्नका लागि राखिएका अत्याधुनिक प्रविधिका स्वचालित क्यामेराहरु यसरी हराएका हुन् । कतिपय मान्छेले चोरेर लगेको पाइएको छ भने कतिपय हात्तीले झिकेर फुटाउने गरेको तथा कतिपय क्यामेरा बाघले समेत लगेको पाइएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत..
सोचे अनुसारको विक्री नभए पछि ‘आइफोन एक्स’को उत्पादन बन्द हुने सम्भावना
बुधबार, माघ १०, २०७४ साल
काठमाडौं, माघ १० । सोचे अनुरुपको बिक्री गर्न नसकेपछि एप्पलले आफ्नो बहुचर्चित आइफोन एक्सको उत्पादन बन्द गर्ने सम्भावना देखिएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार एप्पलले यो गृष्मयामबाटै नयाँ आइफोन एक्स बनाउन बन्द गर्ने सम्भावना छ । गत सेप्टेम्बर १२ मा तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको आइफोन एक्सको बिक्रीदर अपेक्षाकृत नभएपछि एप्पल संघर्षरत छ । एप्पलविज्ञ तथा चर्चित विश्लेषक मिंग ची कुओले यस वर्षको समरमा..
काठमाडौँ महानगरपालिकाको इन्टरनेट राख्ने कार्यमा अन्यौल
मंगलवार, माघ ९, २०७४ साल
काठमाडौँ, ९ माघ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने काम बजेटका कारण अन्यौल भएको छ । पशुपति क्षेत्र, हनुमानढोका, शंखपार्क, बौद्धनाथ लगायत स्थानमा पनि इन्टरनेट राख्ने भनेपनि अर्थ अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको कामपाको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिए । काफ्लेले भने “एक स्थानमा इन्टरनेट राख्नका लागि रु ५५ लाख खर्च हुने हुँदा खर्चको स्रोत तत्काल नभएकाले..
जुकरबर्गलाई आफ्नै फेसबुक स्टाटस भारी , ३.३ बिलियन डलर गुम्यो
काठमाडौं, माघ ३ । आफ्नो एउटा स्टाटसका कारण फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले ३.३ बिलियन गुमाउनु परेको छ । जुकरबर्गले व्यवसाय, ब्राण्ड र मिडियाका पोष्टलाई कम महत्व दिई न्यूज फिडमा परिर्तवन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको साटो पारिवारिक र साथीभाइबीचका कुराकानीलाई प्राथमिकता दिने जुकरबर्गले आफ्नो पेजमा लेखेका थिए । त्यही स्टाटसका कारण फेसबुकले ३.३ बिलियन डलर गुमाउनु परेको ब्लूमबर्ग न्यूजले जनाएको छ..
सोलार प्रविधिले खोलाको पानी गाउँमा, स्थानीयद्वारा तरकारी खेतीमा सिँचाइ गरेर मनग्य आम्दानी
गुल्मी, ३० पुस (रासस) : खोला किनारमा रहेको मुहानको पानी सोलार प्रविधिले डाँडोमा रहेको गाउँबस्तीमै पु¥याइदिएपछि गुल्मीको जिमी र नरम गाउँका स्थानीयलाई सुविधा पुगेको छ । गाउँमा पुगेको खानेपानी सुविधासँगै स्थानीयले तरकारी खेतीमा सिँचाइ गरेर आम्दानी गर्न शुरु गरेका छन् । नजिकमा मुहानको अभावका कारण वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका गुल्मी दरबार गाउँपालिका– ४ वीरबासको जिमी र छत्रकोट गाउँपालिका– ३ हर्दिनेटाको नरम गाउँका..
सूचना महामार्गमा नेपाल–चीन जोडियो, ‘क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक’ को औपचारिक सेवा आरम्भ
काठमाडौँ, २८ पुस : नेपाल र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन व्यावसायिक तवरले सूचना महामार्ग (इन्टरनेशनल कनेक्टिभिटी)मा जोडिएका छन् । निरन्तरको प्रयासपछि नेपालको नेपाल टेलिकम र चीनको चाइन टेलिकम ग्लोबलबीच ‘क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक’ को शुक्रबारबाट औपचारिकरुपमै व्यावसायिक सेवा शुरु भएको हो । योसँगै दुई कम्पनीले एक अर्काका देशमा दूरसञ्चार व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने छन् । नेपाल १ दशमलब ५ जिबी प्रतिसेकेण्ड क्षमताको दूरसञ्चार..
फेसबुकमा पारिवारिक सदस्य तथा साथी–भाइबीचको संवादलाई महत्व दिइन्छ: जुकरवर्ग
एजेन्सी, पौष २८ । फेसबुकले अबको एक साता भित्रमा फेसबुक फीडमा विशेष परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । समाचार, व्यवसायिक ब्राण्ड तथा मिडियाका सम्बन्धको फीडमा फेसबुकले परिवर्तन गर्न लागेको हो । फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत यस्तो जानकारी दिएका छन् । जुकरर्बगले अब फेसबुकमा पारिवारिक सदस्य तथा साथी–भाइबीचको संवादलाई महत्व दिइने बताएका हुन् । अब आफ्नो पोस्टमार्फत धेरैभन्दा धेरै..
चीनबाट ल्याएको इन्टरनेटको आज औपचारिक शुभारम्भ गरिने
काठमाडौं, पौष २८ । नेपाल टेलिकमले आज व्यवसायिक रुपमा चीनबाट ल्याएको इन्टरनेट सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले अपरान्ह सो सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । योसँगै २ दशकभन्दा लामो समयदेखिको भारतीय एकाधिकार समेत अन्त्य भएको छ । भारतबाट मात्र इन्टरनेट कनेक्सन ल्याइरहेको टेलिकमले प्रतिस्पर्धी र भारत मात्रैको परनिर्भरता अन्त्य गर्न र रसुवागढी नाका हुँदै चीनबाट..
नेपालमा मौसमी सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न राडार जडान
काठमाडौँ, २८ पुस । मुलुकको मौसमी सूचना प्रणालीलाई विश्वस्तरको बनाउने लक्ष्यसहित जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अत्याधुनिक मौसमी राडार जडान प्रक्रिया शुरु गरेको छ । विभागले मौसमी सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपालमा पहिलो पटक सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा राडार जडान गर्न थालेको हो । मौसमी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न तीनवटा मौसमी राडार जडानको प्रक्रिया शुरु भइसकेको विभागका महानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले जानकारी..
अनलाइनबाटै फारम : 'लाइसेन्स'का लागि घण्टौं लाइन बस्ने दिन गए
बुधबार, पौष २६, २०७४ साल
काठमाडौं, पुस २६ । अत्यधिक भिडभाड भएपछि सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘लाइसेन्स’ वितरण प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेको छ । यससँगै अब ‘लाइसेन्स’ लिन चाहनेले अनलाइनबाटै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य भएको हो । त्यस्तै, हरेक अञ्चलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘लाइसेन्स’ लिन कोटा निर्धारण गरिएकोे यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक विरेन्द्र बहादुर स्वाँरले जानकारी दिए । स्वाँरका अनुशार हाल यो प्रणाली लागू भएपछि भेरी अञ्चलबाहेकका सबै..
म्याग्दीमा विद्युतीय औजारको प्रयोग गरेर टिमुरको प्रशोधन थालियो
बाबियाचौर, म्याग्दी, २१ पुस। म्याग्दीका उद्यमीले विद्युतीय औजारको प्रयोग गरेर टिमुरको प्रशोधन गर्न थालेका छन् । बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीको निलपहरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जिल्लामै पहिलोपटक टिमुर सुकाउने, प्रशोधन, तौलने र पिँधेर मसला बनाउने औजार भित्र्याएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको रु दश लाख अनुदानमा औजार खरिद गरिएको समूहका सागर बानियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर टिमुर सुकाउने, प्रशोधन..
Results 785: You are at page 25 of 27
विदेशमा अलपत्र ६ यस नेपाली स्वदेश फर्किए
ढलबाट कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फेला परेको प्रमाण छैनः स्वास्थ्य मन्त्रालय
सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुको विकल्प छैनः रायमाझी